कति बढ्दै छ मलेसियामा रहेको नेपालीको तलब..? (जानकारीका लागि सेयर गराै) - Onlines Time
कति बढ्दै छ मलेसियामा रहेको नेपालीको तलब..? (जानकारीका लागि सेयर गराै)
“मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यहां बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ ।”
Prevमलेसियामा कामदार अभाव अब यि क्षेत्रको लागि ३२ हजार विदेशी कामदार भर्ना लिने
Nextबाहुनको छोरा र इन्डोनेशियाकि केटीको प्रेम विवाह,अहिले नेपालमा ल्याएर बि चल्ली बनाए (भिडियो हेर्नुस्)